शाओमी होम अनुप्रयोग कन्फिगरेसन - क्षेत्र परिवर्तन - मिनी-गाइड - स्मार्टमेन
ट्यूटोरियल, शाओमी होम
सियाओमी गृहमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै - मिनी-गाइड
द्वारा प्रकाशित	 मीकलले
1 नोभेम्बर 2019
Aqar, सबैको लागि मार्गनिर्देशन, xiaomi स्मार्ट घर, xiaomi घर
यो पहिलो पटक हुन्छ कि तपाईंले डिभाइस सक्षम गर्नु भएपछि तपाईं यसलाई सियामी होम अनुप्रयोगमा देख्न सक्नुहुन्न, यसको मतलब हामी यसलाई स्थापना गर्न सक्दैनौं (चयनित घर जडान गर्नुहोस् र स्मार्टफोन मार्फत नियन्त्रण)। यसका कारणहरू भिन्न हुन सक्छन्:
कुनै वाइफाइ जडान छैन (राउटरमा वा फोनमा),
गलत राउटर मोडेल
फोनमा कुनै ब्लुटुथ जडान छैन,
नयाँ उपकरण पुनःसेट (उपकरणमा निर्भर बिभिन्न विधिहरू) प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ,
ZigBee गेटवे आवश्यक छ (यसमा वर्णन गरिए अनुसार लेख),
गलत क्षेत्र अनुप्रयोगमा चयन गरिएको छ।
यस ट्यूटोरियलमा, म अन्तिम बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। Xiaomi इकोसिस्टम बाट उपकरणहरू Xiaomi होम अनुप्रयोगमा देखिने छ केवल जब हामी अनुप्रयोग मा उपयुक्त क्षेत्र सेट। AliExpress, Gearbest वा Banggood जस्ता स्टोरहरू द्वारा अर्डर गरिएका उत्पादनहरूका लागि यो प्रायः "चाइना" क्षेत्र हुनेछ (जबसम्म विक्रेताले उत्पाद वर्णनमा अन्य संकेत नगरेसम्म)। यदि हामी पोलिश स्टोरमा उपकरण अर्डर गर्दछौं भने, त्यहाँ एक सम्भावना हुन्छ कि हामीले सेट गर्नु पर्ने क्षेत्र "पोल्याण्ड" हो।
अर्डर गरिएका उत्पादनहरू सावधानीपूर्वक चयन गरिनुपर्दछ, किनकि प्रत्येक पटक हामी फरक क्षेत्रबाट कुनै तत्व नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं, Xiaomi Home अनुप्रयोगमा निम्न प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्दछ, जुन समय खपत हुने र असुविधाजनक हो। थप रूपमा, तपाईं हाम्रो अनुप्रयोगमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवस्थित उपकरणहरू प्रयोग गरेर स्वचालनका लागि नियम र दृश्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न।
तल मैले चयनित क्षेत्र कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारे निर्देशनहरू प्रस्तुत गर्दछु।
१. शाओमी होम अनुप्रयोग सुरुवात गर्नुहोस्
२. पोल्याण्डको लागि स्क्रिनसँग एक एयर प्यूरिफायर जडान गरिएको छ। प्रोफाइलमा जानुहोस्
Settings. सेटिंग्स मा जानुहोस्
The. क्षेत्रमा जानुहोस्
The. तपाईको रुचि सूचीबाट क्षेत्र छान्नुहोस् (यस अवस्थामा चिनियाँ बजारका लागि लक्षित उपकरणहरूको लागि)। त्यसपछि बचत क्लिक गर्नुहोस् र पप-अप विन्डोमा पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाईं क्षेत्र परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ
X. शाओमी होम अनुप्रयोग पुन: सुरु हुन्छ र तपाईंलाई लग इन गर्न सोध्दछ। तपाईंको विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र लग इन क्लिक गर्नुहोस्
The. क्षेत्र परिवर्तन सफल थियो। स्क्रिनमा तपाईं मेरा उपकरणहरू चीनको सर्भरमा जडित देख्न सक्नुहुनेछ
You. तपाई कुन प्रोफाइल छनौट गर्नका लागि तपाईको प्रोफाईल सेटिंग्स पुन: प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ
यति नै। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, Xiaomi होम अनुप्रयोग सेटिंग्समा क्षेत्र परिवर्तन गर्नु अहिलेको क्षणको कुरा हो। सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विशेष सीपको आवश्यकता पर्दैन र माथि वर्णन गरिएका निर्देशनहरू अनुसार चरणबद्ध रूपमा कोही पनि बाहिर जान्छन्।
शाओमी होम अनुप्रयोग - तपाईले के जान्नुपर्दछ?
याद गर्नुहोस् कि Xiaomi होम अनुप्रयोग भित्र अपरेशनको आधार एक नि: शुल्क मी खाताको निर्माण हो। पञ्जीकरण प्रक्रिया आफैंमा कुनै अतिरिक्त समस्या प्रस्तुत गर्दैन। चिनियाँ निर्माताको सफ्टवेयरले यसको उपकरणहरू एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ, जुन स्मार्ट घर डिजाईन र कार्यान्वयन गर्ने भाव हो।
अपरेट गर्न अनुकूलित उपकरणहरू मध्ये शाओमी होम अनुप्रयोग तपाईं उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ:
तीनिहरुमा नियन्त्रण, साथ साथै रिमोट कन्ट्रोल सहज र साथ साथै स्मार्ट घरको कार्यलाई स्वचालित रूपमा समाधानहरू सेट गर्ने पनि छ। केहि कार्यहरू एक विशेष स्मार्टफोनको क्षमताहरूमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, एक IR LED आवश्यक छ तपाईंको फोनलाई अवरक्त रिमोट कन्ट्रोलमा बदल्नको लागि।
Xiaomi होम अनुप्रयोग भित्र एकीकृत समाधानहरू अली एक्सप्रेस मार्फत किनमेल गर्न रूचिको कारण अरूमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ। पोल्याण्डमा यस ब्रान्डको आधिकारिक स्टोर सुरू गर्नु महत्त्वपूर्ण महत्त्वको थियो।
सही तरिकाले कन्फिगर गरिएको शाओमी होम अनुप्रयोगले तपाईंलाई पहिल्यै उल्लेखित प्रकारका उपकरणहरू, साथै तिनीहरूको स्वचालन पनि नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक दिनको आराम महसुस गरीन्छ, अन्य बीचमा, भान्छाघर, बाथरूम, बैठक कोठा वा घरको अन्य कोठा, अपार्टमेंट वा कार्यालयमा। यो आशा गर्न सकिन्छ कि आउँदो वर्षहरूले चिनियाँ ब्रान्डका थप सुविधाहरू ल्याउनेछ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केहि बर्ष पहिले यो Xiaomi प्रणाली पोलिश बजार मा यति लोकप्रिय छ कि आशा गरिएको थिएन। कसैले पनि सोचेन कि यो पोलिश भाषा र पोल्याण्डलाई एक क्षेत्रका रूपमा सेट गर्न सकिन्छ। आज, तपाईं भाषा अवरोध वा विदेशबाट आयात गरिएका उपकरणहरूको फ्याक्ट्री सेटिंग्सको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्न। हाम्रो गाईडले सहि क्षेत्र स्थापित गर्न सजिलो बनाउँदछ र पोलिश प्रयोग गरेर पूर्ण प्रणाली एकीकरण सक्षम गर्दछ।
होम अनुप्रयोगको विकास चिनियाँ स्मार्ट घर कम्पोनेन्टहरूमा बढ्दो चासोको साथ मेल खान्छ। पोलैंडमा सञ्चालन गर्ने प्रमुख अपरेटरहरूसँगको सहकार्यका कारण अन्यहरूका बीच स्मार्टफोन र अन्य शियोमी उपकरणहरूको बिक्री यस उद्योगको सब भन्दा चाखलाग्दो चलन हो। अधिक प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूका लागि काउन्टरवेटले पोलको आत्मविश्वासलाई प्रेरित गर्दछ र पैसाको लागि अनुकूल मूल्यको साथ प्रलोभनहरू।
हाम्रो साइट स्मार्ट होम टेक्नोलोजीमा रुचि राख्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना गरिएको हो। यदि तपाईं यस विषयमा बढि जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो सामाजिक मिडिया जाँच गर्नुहोस् वा तपाईंको टिप्पणीहरू छोड्नुहोस्। हामी यो अनुप्रयोगको अपरेशनको बारेमा बढी व्यावहारिक प्रश्नहरूको जवाफ दिन खुसी छौं। त्यहाँ कुनै समाधान गर्न नसकिने समस्याहरू छन्, र प्रत्येक सेटिले केवल केहि क्लिकहरू आवश्यक पर्दछ, चरण-देखि-चरण।
नयाँ प्रविधिहरूको एक मोहक जसको विचारहरू कहिल्यै अन्त हुँदैनन्! ऊ निरन्तर परीक्षण गर्न नयाँ उपकरणहरू पत्ता लगाउँदैछ, स्मार्ट समाधानहरू डिजाइन गर्दछ र आफैंमा बनाउँछ। अर्केस्ट्रा मानिस जो महान नाचहरू पनि! भज। उनले चिनियाँ अलार्म घडीसँग कसरी कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाए, त्यसैले आदर गर्नुहोस्;)
आरा उत्पादनका लागि अनुकूली प्रकाश व्यवस्था गरियो
अनुकूलित प्रकाश बिस्तारै होमकिट कम्प्याटिवल सामानको निर्माताहरूले रोल आउट गर्दैछ। हालका महिनाहरूमा हव्वा लाईट स्ट्रिप र फिलिप ह्युमा यस्तो कदम चालेको थियो। अब समूह आकारा उत्पादनहरू द्वारा विस्तार गरिनेछ। आकारा संग ...
Apple HomeKit, समीक्षा, शाओमी होम
आकारा T1 - आकारा रिले समीक्षा N को साथ स्थापनाको लागि
Aqar, अकारा टी 1
अकारा T1 यूरोपीय बजार को लागी एक स्विच हो कि एक तटस्थ च्यानल संग एक स्थापना संग राम्रो मेल खाने!
अकारा H100 - नयाँ बुद्धिमान ढोका लक
Aqar, अकारा h100, homekit, स्मार्ट लक
अकराले नयाँ स्मार्ट होम उत्पादनहरू सहित आफ्नो प्रस्ताव विस्तार गर्ने आफ्नो रणनीति जारी राख्दछ। यी उपकरणहरू प्रभावशाली नियमितताका साथ प्रस्तुत छन्, भिडियो क्यामेराको साथ भर्खरको एच १०० स्मार्ट लकको प्रीमियर द्वारा उदाहरणका साथ। उत्पाद हाल छ ...
Apple HomeKit, ट्यूटोरियल, शाओमी होम
Sonoff Mini vs Aara T1 तुलना - minutes मिनेटमा!
Aqar, अकारा टी 1, रिले, Sonoff, Sonoff mini
HomeKit के छ? Sonoff Mini वा Aqara T1? वाइफाइमा कुन र जिगबीमा कुन? सबै प्रश्नहरूको जवाफ तीन मिनेटमा दिइयो!
Apple HomeKit, समीक्षा, स्मार्ट होम, शाओमी होम
अकारा T1 तटस्थ बिना - प्रत्येक अपार्टमेन्टको रिलेको समीक्षा
Aqar, अकारा टी 1, तटस्थ बिना, तटस्थ, रिले
फ्ल्याटहरूको ठूलो ब्लकमा एउटा अपार्टमेन्ट छ। धन्यवाद अकरा T1, कुनै तटस्थ स्मार्ट हुने छैन! यो हामी कसरी यो संक्षेपमा वर्णन गर्न सक्दछौं!
Apple HomeKit, गुगल गृह, समीक्षा, स्मार्ट होम, शाओमी होम
आकारा T1 तटस्थ बिना - ठूलो बोर्ड पनि स्मार्ट हुन सक्छ!
Aqar, अकारा टी 1, आकारा T1 तटस्थ बिना
म मेरो जीवन भर एक ठूलो रेकर्ड मा बाँचें। त्यसोभए एक पटक खैरो र आज फ्ल्याटहरूको ब्लक गरियो। केवल नयाँ निर्माणमा सर्दा मात्र मैले एउटा स्मार्ट घरको बारेमा सोच्न शुरू गरें, तर यहाँ पनि अभावको सपना ...
तटस्थ टीपरा सहित अकारा टी १ - नयाँ अकारा रिलेको समीक्षा
Aqar, अकारा टी 1, रिले
बक्समा मेरो पहिलो रिले अकारा रिले थियो। उही व्यक्ति हो जसले मलाई मेरो अन्धालाई नियन्त्रणमा राख्छ। यद्यपि यो कुनै कमीकमजोरीहरू थिएन। आकाराले यसलाई चिनियाँ बजारका लागि उत्पादन गर्‍यो, परिणामस्वरूप उसको ...
अकरा सस्तो १ February% ले मात्र फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म!
यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि आधिकारिक अकारा वितरणको साथ हाम्रो पदोन्नति कहिले समाप्त हुनेछ, हामी तपाईंलाई हतारमा छौं कि यो तपाईंलाई बताउन हतारमा छ कि यो फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म मात्र हो! १%% - यो तपाईले हाल हाम्रो ब्यानरमा क्लिक गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र ...
नयाँ अकारा H1 प्रकाश मार्गमा स्विच गर्दछ
Aqar, अकारा घर, प्रकाश स्विच
चाँडै, नयाँ अकारा H1 स्विच बजारमा देखा पर्नेछ। यी हुनेछन् अकारा स्विचहरू हाम्रो युरोपेली बजारमा समर्पित! तल तपाईले पहिलो फोटोहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ! :) पूर्ण नयाँ डिजाइन प्रयास गर्नुको सट्टा, EU स्विचहरू हुन् ...
एमआई होममा कुनै बाढी सेन्सर छैन? आराम गर्नुहोस्, यो असफलता मात्र हो
एमआई होम अनुप्रयोगका केही प्रयोगकर्ताहरूले सायद याद गरे कि उनीहरूको बाढी सेन्सरहरू हराइसकेका छन् ... जसरी हामीले पत्ता लगायौं, यो एप्लिकेसनमा बग हो जुन चाँडै नै मिलाउन सकिने छ। समस्या अकारा बाढी सेन्सरहरूको साथ हो कि मात्र ... हरायो। होईन ...